माइक्रोसफ्ट अफिस २०१ 2016 को लागि एक सुरक्षा अपडेट जारी गर्दछ म म्याकबाट हुँ
माइक्रोसफ्ट अफिस २०१ for को लागि सुरक्षा अपडेट जारी गर्दछ
अक्टुबर st१ माइक्रोसफ्ट माईक्रोसफ्टको साथ बन्डल भएका तपाईंको सबै अनुप्रयोगहरू अपडेट गरियो कार्यालय 2016, तपाईंलाई अधिक दिने मुख्य उद्देश्यको साथ सुरक्षा. विशेष रूपमा, अपडेटको मुख्य भागaमा फोकस गर्दछ जोखिम के अनुमति दिन सक्छ रिमोट कोड कार्यान्वयन मार्फत मालिसियस आक्रमणहरू, विशेष प्रकारको अफिस फाइल खोलेर। यो अद्यावधिक अनुप्रयोगबाट लागू हुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड, पावरपोइन्ट, एक्सेल र आउटलुक.
त्यसका साथै माइक्रोसफ्ट पनि सामेल छ नयाँ स्रोतहरू जापानी र चिनियाँ पदहरूको लागि पूर्वनिर्धारित। त्यहाँ छन् मा सुधार माईक्रोसफ्ट सम्पादक 'दृश्य आधारभूत', हामी माइक्रोसफ्टले अद्यावधिक गरेका सबै नयाँ तल राख्छौं:
4 शक्ति बिन्दु:
चीन र जापानका लागि नयाँ पूर्वनिर्धारित फन्टहरू। यी चिनियाँ र जापानी फन्टहरू आउटलुक म्याकको लागि, तिनीहरूसँग आधुनिक, एकिकृत, र राम्रोसँग व्यवहार गर्ने अद्यावधिक गरिएको छ।
भिजुअल बेसिक सम्पादक संवर्द्धन। अब तपाइँ भिजुअल बेसिक सम्पादकमा मोडुलहरू, सन्दर्भहरू, र डिबगिंग सर्टकटहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू जसमा निम्न समावेश छन्:
सुधारिएको भ्वाइसओभर समर्थन समयको, क्यालेन्डर प्रकार्यमा।
ईमेल ठेगाना अब एट्रिब्युसन सन्देशमा समावेश गरीएको छ जब जवाफ दिँदा र फर्वार्डिंग गर्दा पूर्वनिर्धारित।
La सन्देश सूची अब सही रूपमा प्रदर्शन हुन्छ जब फोल्डरहरू स्विच गर्दा, पढ्ने फलकलाई अक्षम बनाइन्छ।
का लागि सुधारिएको 'रिमाइन्डरहरू' कार्यक्षमता सीपीयू खपत कम गर्नुहोस्.
को राम्रो प्रयोग उन्नत खोज अपरेटरहरू, अंग्रेजी बाहेक अरू भाषाहरूको लागि।
नयाँ पूर्वनिर्धारित फन्टहरू चीन र जापानबाट। वर्क फर म्याकमा यी चिनियाँ र जापानी फन्टहरू आधुनिक, एकिकृत, राम्रो व्यवहार गर्ने रूपको लागि अपडेट गरिएको छ।
अनुकूलन कागज आकार अब समर्थित छन्।
फेला पार्नुहोस् / बदल्नुहोस् ट्र्याक परिवर्तनहरू खुला भएको बेला अर्को मिल्दो शब्दमा सर्न फिक्सहरू।
समाधान भयो क्र्यासहरू जुन मेलको प्रयोग गर्दा आउटलुकको साथ मर्ज गर्दछ।
हेडरहरू / फुटरहरू, पृष्ठ सing्ख्या, पृष्ठहरूको संख्या दुई अ than्क भन्दा ठूलो संख्या प्रदर्शन गर्न फिक्स गरियो।
नयाँ पूर्वनिर्धारित फन्टहरू चीन र जापानबाट। म्याकका लागि एक्सेलमा यी चिनियाँ र जापानी फन्टहरू आधुनिक, एकीकृत, उत्तम व्यवहार गर्ने लुकको लागि अपडेट गरिएको छ।
को लागी सुधारिएको समर्थन बाह्य अनुप्रयोगहरूबाट टाँस्नुहोस्.
को स्क्रोलबारहरू अब सही स्क्रोल बार सेटिंग्स मा सम्मान गर्नुहोस् ओएस एक्स.
नयाँ पूर्वनिर्धारित फन्टहरू चीन र जापानबाट। म्याकको लागि पावरपोइन्टमा यी चिनियाँ र जापानी फन्टहरू आधुनिक, एकीकृत, उत्तम-व्यवहार गरिएको रूपमा अपडेट गरिएको छ।
को अपडेटहरू उपलब्ध छन् अब ती सबैको लागि जोसँग पहिले नै २०१ 2016 मा म्याकमा अफिस स्थापना छ। यो मार्फत उपलब्ध छ माईक्रोसफ्ट स्वत: अपडेट उपकरण.
दुर्भाग्यवस यो अहिले यो स्पष्ट छैन कि यस अपडेटले समस्याहरूलाई हल गर्दछ वा गर्दैन कार्यालय 2016 नयाँ अपरेटिंग प्रणालीसँग प्रयोगकर्ताहरूले के गरिरहेका छन् ओएस एक्स एल कैपिटन, हाम्रो सहकर्मी मिगेल एन्जलले टिप्पणी गरे जस्तो यो लेख, जति सक्दो हामीलाई थाहा छ, हामी तपाईंलाई सोया डी म्याकमा सूचित गर्नेछौं।
केही दिन अघि पनि ओएस एक्स एल क्यापिटनमा आउटलुक समस्याहरूको लागि माइक्रोसफ्टले एक प्याच जारी गर्‍यो, अधिक विशेष संग माईक्रोसफ्ट अफिस २०११ यसको मतलब माइक्रोसफ्टले ब्याट्री राख्दैछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » माइक्रोसफ्ट अफिस २०१ for को लागि सुरक्षा अपडेट जारी गर्दछ
एप्पल संगीत प्रश्नहरूको उत्तर दिन एक ट्विटर खाता खोल्छ